Vaovao - Fahasamihafana eo amin'ny vokatra vita amin'ny fingotra sy ny vokatra extruded
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny vokatra vita amin'ny fingotra sy ny vokatra avy any ivelany
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny famokarana, ny vokatra vita amin'ny fingotra dia be mpampiasa kokoa. Ho an'ireo vokatra vita amin'ny fingotra sy plastika izay hita eny rehetra eny, toy ny peratra famehezana, fehikibo, fantsom-bozaka, fehin-kibo, gasket sns, fantatrao ve ny fomba nanaovana azy ireo? Amin'ny ankapobeny, misy fomba roa famolavolana vokatra vita amin'ny fingotra: famolahana sy fitrandrahana, izay azo amboarina amin'ny tombo-kase miorina amin'ny fehikibo sy fantsom-panafahana. Ny vokatra vita dia samy manana ny asany sy ny fizotrany samihafa, ary samy manana ny tombony sy ny fatiantoka ananany. Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny vokatra famolavolana fingotra sy ny vokatra extrusion?
Amin'ny dingan'ny famolavolana, ny vovoka vita amin'ny vovoka sy ny vongan-tsolika dia manamboatra banga iray mitovy endrika amin'ny vokatra vita, izay apetraka ao amin'ny lavaky ny lasitra fanamainana, ary avy eo novolavolaina, nohamafisina na namboarina tamin'ny fanidiana ny bobongolo, ary avy eo demoulded hahazoana ilay vokatra.
Ampiasaina betsaka amin'ny indostria sy fambolena, fitaterana, indostrian'ny herinaratra sy simika, milina fananganana, kojakoja ilaina andavanandro ary sehatra hafa.
Ny vokatra vita amin'ny kofehy vita tamin'ny alàlan'ny famolavolana dia ny mpampifandray indrindra amin'ny rafitra, ny tombo-kase miaro ary ny faritra miaro amin'ny herinaratra, izay natao ho peratra famehezana, gasket, fonon-tànana miaro, plug-in misy tombo-kase, tanany miorina, gasket, tombo-kase solika, faritra maro samihafa ary vokatra hafa.
Extrusion, fantatra ihany koa amin'ny famolavolana extrusion na famolavolana extrusion, dia manondro ny fomba fanodinana izay anafanana ireo fitaovana ary apetaka am-paosy hatrany hatrany amin'ny alàlan'ny hetsiky ny barika sy visy extruder.
Amin'ny famolavolana extrusion, ny extruder, maty sy maty, ary koa ny fitaovana fanampiana mifanentana aminy dia mazàna no voafantina arakaraka ny karazany sy ny endrik'ireo vokatra voahodina, ary avy eo dia voafaritra ny fepetra momba ny fitrandrahana, toy ny haingam-pandeha, ny tsindry maty, ny fametrahana mari-pana, sns. Amin'ny dingan'ny fitrandrahana, mazàna plastika vita amin'ny plastika, mangatsiatsiaka ary manasitrana na manala volo ny fitaovana. Ny vokatra samihafa dia azo alaina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny extrusion samihafa.
Ny extrusion dia azo ampiharina amin'ny fanodinana thermoplastic sy rubber mba hahatsapa ny fametahana, ny famafana ary ny filtran'ny fingotra. Ny vokatra extrusion dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanamboarana, ny indostria petrochemical, ny famokarana milina, ny fitaovana elektronika, ny fiara sy ny fiaramanidina.
Amin'ny alàlan'ny fizotran'ny extrusion, dia afaka manamboatra kofehy famehezana, fantsona, lovia, ravina, sarimihetsika, roller copier mpanonta, tariby ary fantsom-pifandraisana vita amin'ny fantsom-pifandraisana, paty kodiarana vita amin'ny kodiarana, fantsom-batana, vokatra marokoroko misy endriny sarotra, lava, matevina, mametaka vokatra vita vita amin'ny fingotra sy plastika hafa.